The Ab Presents Nepal » ड्युटीमै निदाए प्रहरी! सेयर गरेर सर्बेन्द्र खनाल सम्म पुराउ!
ड्युटीमै निदाए प्रहरी! सेयर गरेर सर्बेन्द्र खनाल सम्म पुराउ!
भद्रपुर -: यो दृश्य हो जिल्ला मालपोत कार्यालय झापामा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी हवल्दारको। उनी ड्युटीको समयमा निदाएको भेटिएको छ। सरकारी कार्यालयमा कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप भई शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने हिसाबले खटाइएका प्रहरी नै ड्यटीमा निदाएपछि सुरक्षा कमजोर हुने पुष्टि भएको छ।
मालपोतको मूल गेटमा राखिएको सुरक्षा पोस्टमा सोमबार मध्या≈न उनी मस्त निद्रामा भेटिएका थिए। उनी निदाएको सञ्चारकर्मीले धेरै पटक निगरानी गरिरहे पनि उनको निद्रा छुटेन। करिब १५ मिनटसम्म बस्दा पनि उनी नब्युँझेपछि नजिकै गएर फोटो खिच्दा समेत उनले पत्तो नै पाएनन।
अत्यधिक गर्मी बढेका कारण पनि उनी निदाएको हुन सक्ने बुझिएको छ। मालपोतका सम्पूर्ण जनताका लागि प्रहरी खटिएको मालपोतका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार खत्रीले बताउनुभयो। निदाएको विषयमा थाहा नभएको उहाँको भनाइ छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्रमा छापिएको छ ।
प्रहरीको पोसाकमा सुरक्षार्थ बसेका प्रहरी निदाउन नसक्ने जिल्लाका डीएसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्वास्थ्यको खराबीलगायत कुनै कारणबिना प्रहरी निदाए पनि त्यो नियमविपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ